သင်ကသင့်မိသားစုနှင့်အတူညနေခင်းဖြုန်းဖို့ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မသိလျှင်, စစ်တုရင်တစ်ဂိမ်းစမ်းပါ။ ဒီရှေးဟောင်းဉာဏဂိမ်းကျွမ်းကျင်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်မြင့်မားတဲ့အိုင်ကျူရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာစစ်တုရင်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူဖို့ကအရေးကြီးတယ် - နှင့်တစ်ဦးအခြို့သောလုံ့လဝီရိယမှာမကြာမီသင်သည်အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားများထက် သာ. ကောင်း၏လေဖြတ်သစ်တွေပေါင်းစပ်အတူတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ chessboard အဖြူရောင်လယ်ကွင်းအမှောင်နှင့်အတူပြောင်းဖို့ရှိရာ 64 ရင်ပြင်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအလျားလိုက်လိုင်းမှရှစ်ဦးတည်းကနေရေတွက်လျက်နှင့်, ဒေါင်လိုက်အတန်းဇမှတစ်ဆင့်လက်တင်အက္ခရာများတစ်ဦးအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ပျဉ်ပြား၎င်း၏သြဒီနိတ်အခန်းထဲမှာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဒေါင်လိုက်အစင်းများနှင့်ရေပြင်ညီအစင်းများ၏အမည်များမှဆင်းသက်လာကြသည်တစ်ခုချင်းစီကိုလယ်တာဝန်ပေးအပ်ဥပမာအားဖြင့်, A7, F5, ဒါကြောင့်ပေါ်မှာ။ ဃနေကြတယ်
ပါတီရဲ့ start ရှေ့တော်၌ထိုဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူနှင့်စစ်တုရင်ကစားရန်မည်သို့နားလည်ပေမယ့်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဘုတ်အဖွဲ့နေရာသငျ့သညျသာ။ သူမသည်လက်ျာဘက်၌အသီးအသီးပါဝင်သူအဆိုပါ angular အဖြူအကွက်ဖြစ်၏နိုင်အောင်ထားတော်မူ၏။ နှစ်ဦးကကစားသမားတစ်ဦးဖြူကိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့တခြားထိန်းချုပ်ထား - မှောင်မိုက် (အနက်ရောင်) အရောင်တဖဲ့။ ဘုရင်ဘုရင်မ (မိဖုရား), ဆင် (အရာရှိများ), လှေ (ခရီးသွားလမ်းညွှန်), မြင်း, ခြေလျင်: အားလုံးကိန်းဂဏန်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အမည်များရှိသည်။ 16 ကိန်းဂဏန်းများတစ်ဦးစုစုပေါင်း - ဒီဂိမ်းရှင်ဘုရင်တပါးတည်းသာလျှင် (CR မှတ်တမ်းတင်ဘို့သတ်မှတ်ရေး) နှင့်ဘုရင်မ (F) နှစ်ခုနိုက် (K) နှစ်ခု Rook (က), နှစျခုဘိရှော့ (ကို C) ​​နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းတွင်ရှစ် pawn (။ ဎ) ပါဝင်သည်။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သာ ပေး. သူတို့ကိုဤမှပိုင်ထိုက်သော, အထူးဖို့ go:
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ကလေးများမှစစ်တုရင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောပြသောကြောင့်ရန်သူကိန်းဂဏန်းယူထားသောလျှင်ဆင်, Rook သို့မဟုတ်မိဖုရား, လယ်ပြင်မှတဆင့်ကျန်နေသေးမရနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးကမြင်းယင်း၏တည်နေရာအရပ်အနီးကပ်ဆုံးလယ်ကွင်းများထဲမှ၎င်းပြင်, စာလုံး ", G" ၏ပုံစံ၌သွားလာပေမယ့်တူညီတဲ့, ထောင့်ဖြတ်အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ပေါ်တည်ရှိပြီးမရသင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးကပေါင်များစွာကိုနည်းလမ်းသာရှေ့ဆက်နိုင်ပါ။ သူတို့ကတခြားပုံစံမျိုးစုံအခမဲ့လျှင်ဒီကိန်းဂဏန်းကနေကနဦးအနေအထားတူညီသောဒေါင်လိုက်ဆီသို့ဦးတည်လယ်၌ 1 သို့မဟုတ်2ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားမည်သည့်ရာထူးကိုပေါင်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာလှုံ့ဆော်ပေးပေမယ့်တစ်ဦးတည်းသာလယ်ပြင်ပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်လာမယ့်ဒေါင်လိုက်ထောင့်ဖြတ်ဦးတည်ချက်ပေါ်ပေါင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ပါလျှင်ဤကိန်းဂဏန်းဟာပြိုင်ဘက်ရဲ့အပိုင်းအစကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
တူညီတဲ့အရောင်တစ်ခုဆင်, Rook, Knight သို့မဟုတ်မိဖုရားသို့လှညျ့မူရင်းအနေအထားကနေအလျားလိုက်အရှိဆုံးအစွန်းရောက်ရောက်ရှိသူကိုစစ်တုရင်ပေါင်၏ဂိမ်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများ, အရသိရသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီ key ကိုကိန်းဂဏန်းလမ်း Castle ပြောင်းရွှေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရှင်ဘုရင်နှင့်အတူတူပင်အရောင်များ၏ Rook တစ်ဦးကိုစတင်အနေအထားသိမ်းပိုက်ခဲ့လျှင်, ထိုသူတို့အလျားလိုက်မှာပြောင်းရွေ့နေကြသည်: ကနဦးလယ်ပြင်နှင့်အတူလှည့်လည်ဆီသို့ဦးတည်ဘုရင်က2ရင်ပြင်ပြန်စီ, ပြီးတော့သူကအဖြစ်ခရီးစဉ်ကိုနောက်ကအောက်ပါအချက်များကိုလယ်ပြင်တို့သည်ရှင်ဘုရင်ကိုကျော် "ခုန်" ။
Shah က - ရှင်ဘုရင်ထံသို့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းတိုက်ခိုက်ရန်။ ဤအခြေအနေ၌, ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိစစ်တုရင်ကစားရန်သင်ယူဖို့ကိုဘယ်လိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သူ Shah ကအောက်မှာထံမှထွက်သွားစေသည်အထိသင်, ရှငျဘုရငျမှတပါးအခငျြးခငျြးကိန်းဂဏန်းနဲ့အပြောင်းအရွေ့လုပ်လို့မရပါဘူး။ အနက်ရောင်ဘိရှော့များ၏အကူအညီဖြင့်အလွယ်တကူအမှန်ပင်သကဲ့သို့, အဖြူရောင်ရှင်ဘုရင်အဘို့ Shakhov ခွအေနကေိုဖန်တီးဖို့နဲ့အပြန်အလှန်နိုင်သည်ဖြူအရာရှိအနက်ရောင်ရှငျဘုရငျကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
အောက်ပါကိန်းဂဏန်းများ Shah ကအနက်ရောင်ကိုအပိုင်းပိုင်းကြေညာသော်လည်း, သူတို့သည်ဂ5ရက်တွင်ဘိရှော့ရွေ့လျားနေဖြင့်ကနေကာကွယ်ထားပါသည်။
ဖျာဘက်မရနိုငျသော Shah ကခေါ်။ ကောက်ခံခဲ့ဖျာတစ်ဦးအနိုင်ရရှိစဉ်းစားသည်။ အဆိုပါဂန္ဗားရှင်း: မိဖုရားသည်ရှင်ဘုရင်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အဘယ်သူမျှမလွတ်မြောက်လမ်းကြောင်းများသူ။ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ရှင်ဘုရင်ကနေမိဖုရား Remove ကအဖြူရှငျဘုရငျကိုကာကွယ်ပေးသည်ကြောင့်၎င်း, နိုင်သည်မဟုတ်။
အဆိုပါဖျာလည်း Rook များ၏အကူအညီဖြင့်ကယ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်: အနက်ရောင် pawn f7, G7 နှင့် h7 စွက်ဖက်အနက်ရောင်အတွက်ထိုးနှက် key ကိုကိန်းဂဏန်းကနေမှလွတ်မြောက်ရန်။
Levenfish GY (1957) "စာအုပ်စစ်တုရင်စတင်" ။
Rokhlin YG "စစ်တုရင်" (1959) ။
"အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်လယ် Walking" Podgayets oa (2006) ။
Volokytin အေ, ခ Grabinsky (2009) "Geeks ဘို့သှနျသငျ" ။
MM "ပျော်စရာစစ်တုရင်" (1966) Yudovich ။
မက်စ် Euwe "စစ်တုရင်ဖတ်စာအုပ်" (2003) ။
အက်ဖ် Halas "ဟုစစ်တုရင်နိုငျငံတျော၌ Adventures ကို" (2016) ။
Kalinichenko မိုင် "ငယ်ရွယ်ချန်ပီယံများအတွက်စစ်တုရင်နည်းဗျူဟာ၏သင်ခန်းစာများ" (2016) ။
Trofimova အေ "ငယ်ရွယ်ကစားသမားများအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များ Excellence" (2016) ။
ကလေးများအဘို့အ Chandler အမ် "စစ်တုရင်။ အဖေက Mat! "(2015) ထားပါ။
ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးအတွက်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရာပူဇော်သက္ကာကို backgammon နှင့် Checker ။
သားသမီးရဲ့ menu ကို
ကလေးများ5နှစ်များအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ
စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦး turntable အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မှတ်ချက်ချ2နှစ်ကလေးသည်အဖြစ်?
Figueres အတွက် Dali ပြတိုက်
နှုတ်တော်ထွက်၏ထောင့်၌ Zayed - အကြောင်းရင်းများနှင့် cheilitis အမျိုးအစားအားလုံးကိုကုသ
ရေချိုးခန်းအဘို့အ Glass ကိုတံခါးများ
ကင်ဆာလွှတ်၏မင်းသမီး Shannen ဒိုဟာဆီရဲ့တာရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောကာလ
အဘယ်အရာကို 35 နှစ်ကြာသူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ပေးရ?
အန္န Kuznetsova - မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်း
အပြာရောင်ဖိနပ် - ဖက်ရှင်ပုံရိပ်အောင်
အမြိုးသမီးမြားအနှစ် 50 ညဦးယံအချိန်တွင်ဆင်မြန်း
အောက်တိုဘာလအတွင်းမုန်တိုင်း - ရိုးရာနိမိတ်
မြက်ခင်းမြက် - ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့?
ကြမ်းပြင်မှ Burgundy ဂါဝန်